Diyaaradaha Qaadka keeni jiray magaalada Muqdisho oo maalintii labaad ka degaya magaalada Jowhar | RBC Radio
Diyaaradaha Qaadka keeni jiray magaalada Muqdisho oo maalintii labaad ka degaya magaalada Jowhar
Muqdisho (RBC Radio) Qaadka laga keeno dalka Kenya ee ka soo degi jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta mar kale ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar,sida laga soo xigtay ganacsatada Qaadka.
Muran la xiriira canshuurka dheeradka ah ee wasaaradda maaliyadda ku soo rogtay ganacsatada Qaadka ayaa sabab u ah in loo weeciyo magaalada Jowhar,waxaana shalay lugu keenay magaalada Muqdisho Qaadka gaadiid.
Ganacsatada Qaadka ayaa u sheegay Jimcadaha maanta ah warbaahinta inay soo dhaweyn ka heleen maamulka Hirshabeelle ee maamulla garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar.
Maamulka Hirshabeelle ayaa dhankiisa soo dhoweysay ganacsato bilowday in ay qaadka ka soo dejiyaan garoonka diyaaradaha ee Jowhar kadibna gaadiid ku geeyaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka warfaafinta hiddaha iyo dalxiiska Hirshabeelle,Mahad Xasan Cismaan ayaa lagu sheegay in dowlad-goboleedka Hirshabeelle ay soo dhoweyneyso ganacsatada dooneysa inay maalgashadaan Hirshabeelle lana macaamilaan dowlad goboleedka.
Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wali kama aysan hadlin go’aanka ay ganacsatada Qaadka uga soo dejinayaan magaalada Jowhar,kaddib markii la siyaadiyay canshuurka uu Qaadka uga soo degi jiray magaalada Muqdisho.